ဘုရားသခင်ဟာ ဘယ်သူဖြစ်သလဲ? ဘုရားသခင်က ဘာနဲ့တူသလဲ?..
ကြီးမားတဲ့အကျယ်အဝန်းပမာဏနဲ့ ဆန်းကျယ်တဲ့အနုစိတ်လက်ရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်တဲ့ ဒီစကြာဝဠာကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကို ကျနော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားက သူ့အကြောင်းကိုပြောပြရုံမကပဲ တခြားအရာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူက ကျွန်တော် သူ့ကိုသိလာနိုင်ဖို့နဲ့ သူနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိလာဖို့အတွက် အမြဲပဲ ဆန္ဒရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော််တို့သူ့ကို သိရုံသိခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အတွင်းကျကျ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တဲ့အရာတွေမှာ သူ့ကိုစကားပြောဖို့နဲ့ ချဉ်းကပ်ဖို့ ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ ကိုယ်နေဟန်ထားတွေ ပြင်ဆင်စုစည်းစရာမလိုပါဘူး။ အိန္ဒြေကြီးနဲ့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့နေဖို့မလိုသလို သီသြလော်ဂျီဓမ္မအတွေးအခေါ်အရ မှန်ကန်ဖို့တွေ၊ မြင့်မြတ်ဖို့တွေ မလိုအပ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ပင်ကို် သဘာဝကိုက ကြင်နာတတ်ပြီး သူ့ဆီသွားတဲ့အခါ လက်ခံတတ်ပါတယ်။
( ကျွန်တော််တို့ပြုလုပ်လေသမျှဟာ ရှိရင်းစွဲပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီးလုပ်တာ သို့မဟုတ် ယခင်နည်းတွေပေါ်မှာ အခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်။
“နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းသည် အလင်းကိုပေး၍၊ မလိမ္မာသောသူတို့ကို လိမ္မာစေတတ်ပါ၏။	နှုတ်ကပတ်တော်သည် အကျွနု်ပ်ခြေရှေ့မှာ မီးခွက်ဖြစ်၍၊ အကျွနု်ပ်လမ်းခရီးကို လင်းစေပါ၏။” (ဆာလံ ၁၁၉း၁၃၀၊ ၁၀၅)